SONATA-CANTATA: September 2014
အိပ်မက်သည် လိပ်ပြာတကောင်၏ အတောင်ကဲ့သို့ ဆန်းပြား နူးညံ့သလောက်၊ လျှပ်စီးရောင်ကဲ့သို့ စူးရှ တိုတောင်းလှ၏။ အိပ်မက်သည် မှော်ဆရာ ဖန်ဆင်းထားသည့် ပြကွက်တစ်ခု ပမာသာ ဖြစ်သော်လည်း၊ ထိုမျှ တိုတောင်းလှသည့် အခိုက်အတန့်လေးအတွင်းရှိ ကျွန်တော်တို့၏ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ကြည်နူးခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်း အားလုံးသည် ပြက်ပြက်ထင်ထင်ရှိကာ တသက် တကမ္ဘာလောက်ပင် ရှည်ကြာနေတတ်ပါသည်။ အိပ်မက်ထဲတွင် ကျွန်တော် နေထိုင်ခဲ့ဖူးသော မြို့ကလေးကို တိမ်တွေပေါ်ကမြို့ဟု အမည်ပေးထားသည်။
မြို့လေးက မြို့ကြီးပြကြီး မဟုတ်သလို၊ ကျေးလက်တောရွာလည်း မဟုတ်။ တောင်ခါးပန်းတစ်ခုတွင် ရှိသည့် အိမ်ခြေသိပ် မများသော သာမာန်မြို့လေး တစ်မြို့သာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထူးခြားသည်က တောင်ခြေကို လှမ်းကြည့်လိုက်လျှင် ဘာမျှ မမြင်ရ။ ထူထဲသော မြူခိုးများက ပိတ်ဆို့ထားသည်။ စင်စစ် မြူခိုးဆိုသည်ထက် တိမ်တိုက်ဟု ဆိုလျှင် ပို၍ မှန်မည်။ တောင်ခါးပန်းမှ အောက်သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်လျှင် အလိပ်လိပ် ထနေသည့် တိမ်စိုင် တိမ်တိုက်များက လှိုင်းထနေသော ပင်လယ်ပြင်နှင့်ပင် ပို၍ တူနေသည်။ ညနေ ဆည်းဆာဆိုလျှင် ထိုတိမ်တိုက်များပေါ်သို့ ပန်းနုရောင် နေခြည် ထိုးလိုက်သောအခါ တိမ်တိုက်တို့၏ အရောင်နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး လိမ္မော်ရောင်၊ ပန်းသွေးရောင်၊ ခရမ်းရောင် စသဖြင့် အရောင်မျိုးစုံ ဖြစ်သွားကာ ဒေါင်းမြီး ဖြန့်၍ ကနေသလိုပင်။ နေလုံးကြီးက တိမ်တိုက်ကြီးထဲသို့ မြုတ်ဝင်သွားလျှင်တော့ တိမ်တိုက်တို့ကို ဖြတ်၍ တက်လာသော ဆည်းဆာရောင်ကြောင့် မြို့လေးက ရောင်စုံမီးများ ထွန်းထားသည့်နယ် ဆွတ်ပျံ့ဖွယ် ကောင်းလှသည်။ ထို့ကြောင့် ညနေစောင်းပြီဆိုလျှင် တောင်ခါးပန်းတွင် လမ်းလျှောက်သူများ၊ ခုံတန်းလေးများတွင် ထိုင်နေသူများ၊ လေတံခွန် လွှတ်သူများဖြင့် စည်ကားနေကာ အပန်းဖြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေတခုနှင့် တူတော့သည်။ သို့သော် တောင်ခါးပန်း အစပ်သို့ကား မည်သူမျှ မသွားကြ။ ချောက်ကမ်းပါးက အလွန်တရာ နက်စောက်ကာ တိမ်တိုက်များဖြင့် ပိန်းပိတ်နေသောကြာင့် အန္တရာယ်များလွန်းလှသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် အကာအရံကား မရှိ။ သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များလည်း မရှိ။ “တောင်ခါးပန်းစပ်သို့ မသွားရ” ဆိုသည်မှာ မြို့ခံလူတွေအတွက် လူမှန်းသိတတ် စကတည်းက သိနေပြီးဖြစ်သောကြောင့် အထူးတလည် သတိပေးနေရန် မလိုတော့။
တကယ်တော့ တောင်ခြေတွင် ဘာရှိသည်ဟု ဘယ်သူမျှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မသိကြ။ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် ပါးစပ်ရာဇ၀င်များဖြင့်သာ ကြားဖူးကြခြင်း ဖြစ်သည်။ တောင်ခြေတွင် မြစ်တစ်စင်းရှိသည်။ ထိုမြစ် အလွန်တွင် အလွန် ကြီးကျယ် ခမ်းနားသည့် မြို့ကြီးတစ်မြို့ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ လူ့အသုံးအဆောင်မျိုးစုံ ဇိမ်ခံပစ္စည်းမျိုးစုံ ရှိ၍ လိုတရ နတ်ဘုံနတ်နန်းသဖွယ် တင်စားပြောဆိုကြသည်။ ၀ိဇ္ဇာဓိုရ်များက စီရင် ဖန်ဆင်းထားသည့်အလား နည်းပညာ ထွန်းကားလှသည်။ သူတို့၏ ဦးခေါင်းတွင် ၀တ်ဆင်ထားသော ခေါင်းဆောင်း ကိရိယာအကူအညီဖြင့် စိတ်ဖြင့် စေခိုင်းနိုင်သော စက်ယန္တရားများ၊ ယာဉ်ရထားများကို အသုံးပြုကြသည်။ အချင်းချင်းကိုလည်း စိတ်ဖြင့်ပင် ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်ကြသည်။ ဇီဝဆေးပညာ ထွန်းကားလှသဖြင့် ယိုယွင်းသည့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်များ အားလုံးလိုကိုပင် အစားထိုးလဲလှယ်နိုင်သော ကြောင့် ဇရာကို အံတုနိုင်ကြသည်။
သို့သော် အစစအရာ ပြည့်စုံနေသည်ကား မဟုတ်။ သူတို့တွင် အားလပ်ချိန်ဟူ၍ မရှိ။ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့်ဘ၀ဟူ၍ မရှိ။ တစ်ဦးတည်း ထိုင်နေသည့် အခိုက်၌ပင် တမြို့လုံးတွင် ဖြစ်ပျက်နေသမျှ သတင်းများ၊ စေခိုင်းချက်များက ဦးခေါင်းအတွင်း ၀င်ရောက်နေသည်။ ထိုင်လျှက်ပင် တမြို့လုံးမှ လူအားလုံး လိုလိုနှင့် စကားပြောနေရသည်။ စင်စစ် သူတို့ ၀တ်ဆင်ထားရသည့် ခေါင်းဆောင်းသည် သူတို့အား စောင့်ကြည့် အမိန့်ပေးနေသည့် ကိရိယာပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့သည် ထိုခေါင်းဆောင်းကို ခေတ္တမျှပင် ချွတ်ကြည့်ရန် စိတ်ကူးမိကြပုံ မရ။ ထိုခေါင်းဆောင်းကို ချွတ်လိုက်ပါက အကျဉ်းကျနေသူ တစ်ဦးသဖွယ် ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ တကယ်လည်း အပြစ်ကျူးလွန်သူများကို ခေါင်းဆောင်း ဖြုတ်၍ ဒဏ်ခတ် အပြစ်ပေးလေ့ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုခေါင်းဆောင်း မရှိတော့လျှင် သူတို့၏ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ကြည့်နေသည့် စနစ်များလည်း ရှိမည်မဟုတ်တော့။ ထိုထက် ပိုဆိုးသည်က မြို့၏ လေထုသည် အလွန် ညစ်ညမ်းလှသောကြောင့် ခေါင်းဆောင်း မပါဘဲ နာရီပိုင်းထက် ပို၍ အသက်ရှင်ရန် မလွယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြို့လေးတွင် တွေ့နေရသည့် တိမ်ပင်လယ်ကြီးသည် ထိုမြို့မှ ထွက်သော မီးခိုးငွေ့များ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသူက ဆိုသည်။ မြို့ဘေးတွင် ပတ်၍စီးနေသည့် မြစ်သည်လည်း ပုတ်ပွနေသော အသေကောင်များ၊ မီးတောက်လောင်နေသည့် ဆီကွက်များ၊ ၀ါကြန်ကြန်အဆိပ်ရည်များဖြင့် ညစ်ညမ်းနေသည်။ ပြစ်မှုကြီးကြီး ကျူးလွန်သူများကို ရဲများက ဤမြစ်အတွင်းသို့ ပြစ်ချ၍ သေဒဏ်ပေးသည်။ အက်စစ်ရည်များ၊ အဆိပ်များဖြင့် လောင်ကျွမ်းကာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် သေဆုံးကြရမည် ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ အားလုံးက ဒဏ္ဍာရီများသာ ဖြစ်သည်။ တိမ်တိုက်များ အောက်တွင် ထိုမြို့ကြီး တကယ်ရှိ မရှိပင် မသိ။ ဈေးထိပ်တွင် တဲထိုးနေသော အဖိုးအိုက ကလေးများအား ပြောသည့် ပုံပြင်ကို ချဲ့ကားကာ တဆင့်စကား ပြောဆိုနေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် မရှိဟုလည်း တတစ်ချ မပြောနိုင်။ တောင်ခြေမှ ပြန်လာသူဟု တဦးတလေမျှ မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပြန်လာသူမရှိဟု ပြောရသည်မှာလည်း သွားသူတွေတော့ ရှိနေ၍ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မြို့လေး၏ အထွက်တွင် အလွန်နက်သည့် တောအုပ်တစ်ခု ရှိသည်။ ထိုတောအုပ်၏ အလွန်တွင် တောင်ခြေသို့ ဆင်းသော လမ်းရှိသည်။ အဆင်းလမ်းသာ ရှိ၍ အတက်လမ်း မရှိ။ လမ်းထိပ်တွင် ကနုတ်ပန်းများဖြင့် အလှဆင်ထားသည့် မုခ်ဦးကြီး တစ်ခုရှိသည်။ မုခ်ဦးထိပ်တွင် ကျွန်တော်တို့ မြို့လေးမှ နှုတ်ဆက်သော စာတမ်းကို စာလုံးကြီးကြီးဖြင့် ရေးထားသည်။ မုခ်ဦးအလွန်တွင် တိမ်တွေကိုသာ မြင်ရသည်။ မုခ်ဦးနှင့် နှုတ်ဆက်စာတမ်းက လွမ်းမောဖွယ် အနုပညာလက်ရာ အလွန်မြောက်လွန်းလှသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဤသို့မထင်။ မုခ်ဦးသည် ထွက်ခွာသွားသူများအတွက် သူတို့ ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာအားလုံးနှင့် မြို့လေးကို ရာသက်ပန် စွန့်လွှတ်လိုက်ရတော့မည့် သင်္ကေတဖြစ်နေ၍သာ ကြေကွဲ လွမ်းမောဖွယ်ကောင်းနေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း နေ့စဉ်နှင့် အမျှ တောင်ခြေသို့ ဆင်းမည့်သူများက မုခ်ဦးရှေ့တွင် တန်းစီ၍နေကြပါသည်။
တခါတော့ အဖိုးအိုကို ကိုယ်တိုင် သွားမေးသည် - “အဖိုးပြောတဲ့ တောင်ခြေက မြို့ကြီးက တကယ် ရှိလို့လား”။ အဖိုးအိုက ဘာမှ ပြန်မဖြေဘဲ ပြုံးနေသည်။ နောက်တော့ အဖိုးအိုက မိမိကို ဆွဲခေါ်သွားပြီး၊ တောစပ် အရောက်တွင် တောင်ထိပ်သို့ တက်သော လမ်းကလေးတစ်ခုကို ပြသည်။ လမ်းဟုဆိုသော်လည်း ဆူးခြုံများဖြင့် ဖုံးပိတ်နေပြီး ကျောက်တုံးများကို တွယ်ကပ်ကာ ခက်ခက်ခဲခဲ တက်ရမည် ဖြစ်သည်။ အထက်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့လည်း ဘာမျှ ထူးထူးခြားခြား မမြင်ရ။ မြူတိမ်ကင်း၍ ပြာလဲ့နေသော ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကိုသာ မြင်ရသည်။ တသက်လုံး တိမ်တွေကိုသာ ကြည့်နေခဲ့ကြသည်။ တိမ်တွေအောက်က မြို့ကြီးအကြောင်းသာ မမောတမ်း ပြောဆိုလာခဲ့ကြသည်။ ကိုယ် တသက်လုံးနေလာခဲ့သည့် တောင်၏ ထိပ်ကို တခါမျှ မော် မကြည့်ခဲ့ဖူးသည့် မိမိအဖြစ်ကို တအံ့တသြ သတိထားမိသည်။ “ဟိုး အထက်မှာ ရွာလေးတစ်ရွာ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာမှ ဆန်းဆန်းပြားပြား စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိဘူး။ ဘာအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမှလည်း မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အေးအေးလူလူတော့ နေလို့ရတယ်။ ကဲ မောင်ရင် ဒီကနေ တက်ပေတော့” - အဖိုးအိုက တောင်ထိပ်သို့ လက်ညိုး ညွှန်ပြပြီး သူနှင့်မဆိုင်တော့သလို ပြန်ထွက်သွားသည်။ အထက်သို့ ထပ်၍ မော့ကြည့်လိုက်သည်။ ဘာမျှ မမြင်ရ။ နောက်သို့ အနည်းငယ် ဆုတ်၍ မော့ကြည့်သည်။ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးသည် ပို၍ ကျယ်ဝန်းလာသည်ဟု ထင်ရသည်မှ အပ ဘာမျှ မထူး။ နောက်သို့ ထပ်၍ ထပ်၍ ဆုတ်ကြည့်သည်။ ပြာလဲ့နေသော ကောင်းကင်ပြင်ထဲသို့ ရောက်သွားသလို ထင်ရ၍ ခန္ဓာကိုယ်ကို လေအေးတချက် တိုးဝှေ့သွားသည်။ လှပ်ကနဲ ရင်ထဲတွင် အေးစိမ့်သွားသည်။ ပက်လက် လန်လျှက် ရောင်စုံတိမ်တိုက်အတွင်း အိဝင်၍ ကျသွား၏။ အရာရာသည် နောက်ကျသွားခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။
ဖွားဖွားတာမှာ မြေး ခြောက်ယောက်ရှိတယ်။ အရွယ်လေးတွေက မတိမ်းမယိမ်း ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ။ တနေ့သော မိသားစု တွေ့ဆုံပွဲမှာပေါ့ ၀မ်းကွဲ မောင်နှမတတွေ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ် ဘ၀ရည်မှန်းချက်တွေအကြောင်း ပြောကြတယ်။
“ဘွဲ့ရပြီးရင် ဘာလုပ်ကြမှာလဲ” ဥမ္မာက စမေးတယ်။
“သားကတော့ ဖွားဖွားတာလို အင်ဂျင်နီယာ လုပ်မှာ” လို့ သူ့မောင်အရင်းဖြစ်တဲ့ အာကာက မဆိုင်းမတွ ဖြေတယ်။
“ဖွားဖွားတာကလေ ၁၉၉၀ကနေ-၂၀၀၀ခုနစ်လောက်ထိ ဓာတ်ပုံမော်ဒယ်လ် လုပ်ခဲ့တာ… သူရိုက်ခဲ့တဲ့ မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးပုံတွေ၊ ပြက္ခဒိန်တွေ ရောင်းမလောက်အောင်စွံခဲ့တယ် ဆိုတာ သိကြရဲ့လား” လို့ ရတနာက မျက်ခုံးလေး ချီပြီးပြောလိုက်တော့…
“ဖွားဖွားတာက သမီးကို အဲ့လို ပြောခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး” ရွှေရည်က ပျာပျာသလဲ ပြောရှာတယ်။ “သူ့ဘ၀တလျောက်လုံးကို ဆန်ကုန်သည်အဖြစ်နဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့တာပါတဲ့… ဖျာပုံမှာ နေခဲ့တုန်းက ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရှာနိုင်ခဲ့တယ် လို့တောင်ပြောသေး”
“မဟုတ်တာတွေ…သူက ကွန်ပြူတာကျောင်းမှာ စာပြခဲ့တာပါဟာ” လို့ ဇေယျာက အသေအချာ ပြောပြန်တယ်။
“မင်းတို့ တယောက်ကိုမှ ဖွားဖွားတာက အမှန်ပြောခဲ့ဟန် မတူဘူး။ တကယ်တော့ သူက စင်္ကာပူမှာ ကလေးထိန်း လုပ်ခဲ့တာကွ…” လို့ သူတို့ထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကျော်စွာက ပြောလိုက်တယ်။
“ကဲပါလေ…ဖွားဖွားတာ ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သူ ကိုယ်တိုင်ကိုပဲ မေးကြည့်ရအောင်” လို့ အငယ်ဆုံးလေး ဆွေဆွေက အဖော်ညှိလိုက်ပြီး၊ မီးဖိုထဲမှာ ပီဇာဖုတ်နေတဲ့ ဖွားဖွားတာ အနားသွားပြီး မေးကြပါတယ်…။
“ဖွားဖွားပြောလည်း ကလေးတို့ ယုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး” လို့တခွန်းသာပြောပြီး ဂျုံတွေကို ပြုံးပြုံးကြီး ဖိနယ်နေတော့တယ်။
အမှန်တကယ် ဖွားဖွားတာက ဘလော့ဂါ လုပ်ခဲ့တာ…:P
မေဓာဝီတဂ်လို့ ပြုံးပြုံးကြီး ရေးပါသည်။
အိပ်မက် မက်နေခြင်း ဖြစ်၏။
နံနက်ခင်းသည် သာသာယာယာ ရှိလှ၍ လမ်းလျှောက်လိုစိတ် ဖြစ်မိသည်။ သိပ်မလှမ်းလိုက်ရဘဲ ကိုယ်က သင်္ချိုင်း တစပြင်တခုတွင် ရောက်၍ နေလေသည်။ လမ်းလေးသည် အကွေ့အကောက် အလွန်များစွာ ဖောက်လုပ်ထား၍ သိပ်အသုံးတဲ့မည့်ဟန် မရသော်လည်း၊ ရေစီးသန်သည့် စမ်းချောင်းလေးတွင် မျောပါသွားသကဲ့သို့ လမ်းလေးအတိုင်း မျှောလိုက်သွားဖြစ်သည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် မြင်နေရသည့် လောလောလတ်လတ် မြုတ်နှံထားဟန်တူသော မြေပုံမို့မို့လေးဆီသို့ သွားရန် စိတ်ကူးပေါက်သည်။ ထိုမြေပုံက စိတ်ကို ဆွဲဆောင်လွန်းလှသော်လည်း အတော်နှင့် မရောက်နိုင်။ အချင်းချင်း ရောယှက်ကာ တလူလူလွင့်နေသည့် အလံများ၊ တံခွန်များက ကွယ်နေသဖြင့် မြေပုံလေးကို မမြင် တချက်၊ မြင် တချက်။ အလံကိုင်သူများကို မမြင်ရသော်လည်း၊ သူတို့ အလွန် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေကြလိမ့်မည်မှာ သေချာသည်။
မျက်စိက ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ မြင်ကွင်းများတွင် စူးစိုက်နေဆဲ၊ မြေပုံလေးက မိမိလျှောက်နေသော လမ်းနံဘေးတွင် ရောက်နေသည်ကို အမှတ်တမဲ့ မြင်လိုက်သည်။ ကျော်သွားလု နီးနီးပင်။ လမ်းဘေး မြက်ခင်းပေါ်သို့ ခုန်ထွက်လိုက်သည်။ လမ်းအတိုင်း မျှောလိုက်လာသည်ကို အရှိန်သတ်လိုက်သဖြင့် ယိုင်ထိုးသွားပြီး မြေပုံလေးရှေ့တွင် ဒူးထောက်မိရက်သား ဖြစ်နေလေသည်။ မြေပုံ၏ အနောက်တွင် ရပ်နေသည့် လူနှစ်ဦးက သူတို့ သယ်လာသည့် ကမ္ပည်းကျောက်စာတိုင်ကို မြေကြီးထဲသို့ ထိုးစိုက်ချလိုက်သည်။ ကျောက်စာတိုင်က အင်္ဂတေကိုင်ထားသကဲ့သို့ မြေသားပေါ်တွင် ကြံ့ကြံ့တည်၍ နေလေ၏။ ထိုအခိုက်မှာပင် ချုံနောက်ကွယ်မှ နောက်ထပ် လူတစ်ယောက် ပေါ်လာသည်။ ပန်းချီဆရာတဦးဖြစ်မည်ဟု တန်းပြောနိုင်သည် (ပန်းတမော့ဆရာတဦးလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်)။ ဘောင်းဘီရှည်နှင့် ကြယ်သီး တလွဲစီ တပ်ထားသည့် ရှပ်အင်္ကျီိကို ၀တ်ဆင်ထားသည်။ ခေါင်းထက်တွင် ကတ္တီပါ ဦးထုတ်တစ်လုံး ဆောင်းထားသည်။ ရိုးရိုး ခဲတံတစ်ချောင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားကာ လေထဲတွင် ကောက်ကြောင်းများ ဆွဲရင်း အနီးသို့ လျှောက်လာသည်။
ကျောက်စာတိုင် အထက်နားတွင် ခဲတံဖြင့် စတင် ရေးခြစ်လိုက်သည်။ ကျောက်တိုင်က အတော်လေးမြင့်၍ ကုန်း ရေးရန် မလို။ သို့သော် သူနှင့် ကျောက်စာတိုင်ကြားမှ မြေပုံပေါ်သို့ တက်မနင်းလိုသဖြင့် ရှေ့ကို ကိုင်းထားရသည်။ ခြေဖျားထောက်ထားရသဖြင့် ဟန်ချက်ညီစေရန် ဘယ်လက်ဖြင့် ကျောက်စာတိုင်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ် ထောက်ထားသည်။ ရိုးရိုးခဲတံ တစ်ချောင်းကိုသုံးကာ ရွှေရောင်စာလုံးများကို ရေးထိုးလိုက်သည်မှာ အတော်ကျွမ်းကျင် ပြောင်မြောက်လှပေသည်။ “ဤနေရာတွင် …” ။ ရေးလိုက်သော စာလုံးတိုင်း ခပ်နက်နက် ရေးထိုးထားသည့် ရွှေရောင်စစ်စစ်ဖြင့် လှလှပပ သေသေသပ်သပ် ရှိလှသည်။ ထိုစာလုံးများကို ရေးထိုးပြီးနောက် သူက ကိုယ့်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ကိုယ်ကတော့ သူဆက်ရေးမည့် စာလုံးများကိုသာ စိတ်စော၍ ကျောက်သားပြင်ကိုသာ ငေးကြည့်နေမိသည်။ သူ့ကို သိပ်ဂရု မစိုက်မိ။ ဆက်ရေးရန် သူ ပြန်လှည့်သွားသည်။ သို့သော် တစ်ခုခုက ဟန့်ထားသလို ဆက်ရေး၍ မရဘဲ ဖြစ်နေဟန်တူသည်။ ခဲတံကို ကျောက်သားပြင်တွင် ထောက်ကာ ကိုယ်ကို လှည့်ကြည့် ပြန်သည်။ သည်တစ်ခါတွင် ကိုယ်က သူ့ကို ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ သူအတော်လေး အားတုန့်အားနာ ဖြစ်နေဟန်တူသည်ကို သတိပြုမိသည်။ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိ။ အစောပိုင်းက သူ့၏ တက်ကြွ ဖျတ်လပ်မှုများ အားလုံး လွင့်ပျောက်သွားသည်။ သည့်အတွက် ကိုယ်လည်း ရှိုးတိုးရှန့်တန့် ဖြစ်သွားသည်။ တဦးကို တဦး အားကိုးရာမဲ့ ငေးကြည့်နေကြသည်။ မည်သို့မျှ ဖြေရှင်းမရနိုင်သည့် ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းတစ်ခု ရှိနေလေပြီ။ သင်္ချိုင်းဇရပ်ဆီက ကြေးစည်သံကို အချိန်မတော် ကြားရသည်။ ပန်းချီဆရာက လက်ကို ပင့်လိုက်တော့ ကြေးစည်သံ တိတ်သွားသည်။ အတန်ကြာတော့ ကြေးစည်သံကို ပြန်ကြားရပြန်သည်။ သည်တကြိမ်တွင် အသံက ခပ်သဲ့သဲ့။ အသံ စမ်းနေသလို ရုတ်ချည်း တိတ်သွားပြန်သည်။ ပန်းချီဆရာ ရေးထိုးမည့် စာလုံးများကြောင့် ရင်ထဲ နင့်သွားသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို အုပ်ကာ အချိန်အတော်ကြာကြာ ငိုရှိုက်နေမိသည်။ ကိုယ် စိတ်ငြိမ်သွားသည်အထိ ပန်းချီဆရာက စောင့်ပါသေးသည်။ သို့သော် မထူးတော့သည့်အတွက် သူက ဆက်လက် ရေးထိုးလိုက်လေသည်။ ပထမဆုံး ရေးလိုက်သည်မှာ “ဧ” ဖြစ်သည်။ သူ အတော်လေး တွန့်ဆုတ်စွာ ရေးနေရပုံပင်။ သူ့လက်ရာက ယခင်လို မလှတော့။ ရွှေရောင်လည်း မ၀င်းတော့။ ရေးချက်သည် မညီမညာ ဖျော့တော့တော့နိုင်လှပြီး၊ စာလုံးက ကြီးလွန်းနေသည်။ “ရာ” ဆိုသော စာလုံးကို ရေးအပြီးတွင် ပန်းချီဆရာသည် ဒေါသတကြီးဖြင့် မြေပုံကို ခြေဖြင့် နင်းဆောင့်လိုက်သည်။ ခပ်ညစ်ညစ် မြေမှုန့်များက ပြန့်ကျဲသွားသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ် သူ့ကို နားလည်သွားသည်။ သို့သော် သူ့ကို တောင်းပန်ရန် နောက်ကျသွားလေပြီ။ လက်ချောင်းများဖြင့် မြေသားကို ထိုးဆွလိုက်သည်။ ဘာအခုအခံမျှ မရှိတော့ပါ။ အရာရာသည် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ပြီးသကဲ့သို့ ရှိနေလေသည်။ အပေါ်ယံ မြေသားလွှာသည် ပြယုဂ်သက်သက်သာ ဖြစ်နေသည်။ ထိုမြေသားလွှာ၏ အောက်တွင် ဟင်းလင်းပွင့်နေသော တွင်းတခုရှိသည်။ ထိုတွင်းထဲသို့ ကျောခင်း၍ အသာလိမ့်ချလိုက်သည်။ ဦးခေါင်းက လည်ပင်း အထက်၌ မတ်မတ်ရှိလျှက်ပင် အသူတစ်ရာ ချောက်ထဲသို့ ကျသွားသည်။ ကိုယ့်အမည်ကတော့ ကျောက်သားပြင်ထက်တွင် ခန့်ငြားထည်ဝါစွာ ကျန်ခဲ့သည်။
ထိုမြင်ကွင်းဖြင့်ပင် ပီတိ တစိမ့်စိမ့်ဖြစ်ကာ အိပ်မက်မှ နိုးထလာပါသည်။
(အမရွှေစင် တဂ်လို့ A Dream by Kafka ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။)
Labels: tag post, ဧရာ
မယ်ညိုရဲ့ “အမေနဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သမီးရယ်” ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကနေ တဂ်တဲ့အတွက် ဒီပို့စ်ကို “အမေနဲ့ မိသားစု” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် မရေးနိုင်လို့ ဆရာမတယောက်ဆီကရတဲ့ ကဗျာလေးကို ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျေနပ်ပါနော် မမယ်ညို ...း-)
“Oh excuse me please,” was my reply.
By the time, I felt very small,
He smiled, “I found’em, out by the tree.
I picked’em because they are pretty like you.
I knew you’d like’em, especially blue.”
I said, “Son, I was very sorry for the way I acted today;
(ကဗျာရေးသူ အမည် မသိပါ။)
မင်းမရှိ ငါမရှိ ...
“မင်းမရှိ ငါမရှိ အားလုံး ဘယ်သူမှ မရှိ…” ထူးအိမ်သင်၏ သီချင်း တစ်ပိုင်းတစ်စကို ဆိုညည်းမိရင်း သားကြီး ငယ်ငယ်က အကြောင်းတစ်ခုကို သတိရသည်။ စကားပြောတတ်စ သားကို ခေါင်း၊ လက်၊ မျက်စိ စသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း အမည်များကို သင်ပေးရင်း၊ မိလိန္ဒပဉှာမှ မိလိန္ဒမင်းကြီးနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့ တွေ့ဆုံခန်းက အတွေးထဲ ရောက်လာသည်။ မိလိန္ဒမင်းကြီးက “ဆံပင်သည် နာဂသေနလော၊ အမွေး လက်သည်း၊ ခြေသည်းတို့သည် နာဂသေနလော…” စသဖြင့် ပညာစမ်းသည်။ ထိုအခါ ဘီး၊ ၀င်ရိုး၊ ထမ်းပိုးစသော အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတို့သည် ရထား မဟုတ်သော်လည်း၊ ထိုအစိတ်အပိုင်းတို့ကြောင့် ရထားဟူသော အမည် ပညတ်ရကြောင်း၊ ရူပက္ခန္ဓာစသော ခန္ဓာတို့ကို အစွဲပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်အပ်သော ပညတ်တရားဖြစ်ကြောင်း အရှင်နာဂသေနက ပြန်လည်ဖြေရှင်းသည်။ ထိုအမေးအဖြေကို တွေးမိရင်း သား၏ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းလေးများကို ပြကာ မေးခွန်း ထုတ်လိုက်သည်။
မေး။ ။ ဒါ ဘယ်သူလေးလဲ…။
ဖြေ။ ။ သားသား
မေး။ ။ ဒါက ဘာလဲ…။
ဖြေ။ ။ သားသား ခေါင်း။
မေး။ ။ ဒါကကော …။
ဖြေ။ ။ သားသား လက်။
မေး။ ။ ဒါဆို ဒါကကော …။
ဖြေ။ ။ သားသား မျက်စိ။
“ဒါဆို သားသားက ဘယ်မှာလဲ” ဟု မေးခွန်းထုတ်ရန် ပြင်ထားသော ကျွန်တော် ငိုင်သွားရသည်။ သားအဖြေက အတွေး တစ်ခုကို ပေးသည်။ ပညတ်တွေ ပရမတ်တွေကို အာဘော်အာရင်း သန်စွာ ပြောဆို ဆွေးနွေးနေကြသော်လည်း၊ ကျွန်တော်တို့၏ အသိစိတ် အစဉ်တွင် စွဲကပ်နေသည့် “ငါ” ကို ခပ်လွယ်လွယ် ဆွဲခွာချရန် မလွယ်... ။
စကားပြောတတ်စ သားကသာ မိမိကို တရားချခဲ့သည် မဟုတ်။ မသီတာကလည်း တရားချ ပြန်သည်။ အခုတစ်လော ကြားဖူးနားဝ ဆေးမြီးတိုများ ဖျော်ဖျော် တိုက်သော်လည်း မသီတာ၏ ကိုယ်အလေးချိန်က မကျ။ တစ တစသာ တိုး၍ လာသည်။ ဘယ်နှယ့် ဖြစ်တာပါလိမ့်လို့ ပြောမိတော့… “ရှင်ဟာလေ သင်္ခါရတရားကို ပါးစပ်ကသာ ပြောနေတယ်၊ တကယ် မသိသေးပါလား” ဟု ဆိုလေသည်။ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တတရားတို့ကို ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ဖို့ ကျွန်တော် အချိန်ပေးရပါလိမ့်ဦးမည်။
Happy Blog Day 2014
စာမရေးဖြစ်တာ ကြာလို့ ချေးကပ်နေတဲ့ Sonata Cantata ရဲ့ သီတာအင်ဂျင်တခြမ်းကို (အခြား ဧရာဘက်ခြမ်းကတော့ သူ့ဖာသာသူ ပုံမှန်လည်ပတ်နေပါတယ်) ဘလော့ဒေးကျမှ အတင်းကာရော စက်ထနှိုးလို့ မီးခိုးတွေရော ဖုန်တွေရောနဲ့ Happy Blog Day လို့ ငယ်သံပါအောင် အော်လိုက်ပါတယ်…။ (အ ဟွတ် ဟွတ် ဟွတ် မီးခိုးမွှန်သွား)
“ကိုယ့်အကြောင်းတွေ ချည်းပဲ ရေးမနေနဲ့…” - ကိုဧရာ
“စာကို စကားပြောသလို ရေးနေကြတယ်” - စာရေးဆရာ တဦး
ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေက စာမရေးဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းအချက်များထဲက အချို့ပါ။ ခက်တာက ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်အကြောင်းပဲ ကိုယ် ရေးချင်တာ။ ရေးတတ်တာ။ တကယ်တော့ စာရေးတာနဲ့ စကားပြောတာဟာ ပုံစံအားဖြင့် မတူပါဘူး။ ဘလော့ဆိုတဲ့ online ပေါ်မှာ စာရေးတော့ စကားပြောသလိုပုံစံနဲ့ပဲ အများအားဖြင့် ရေးဖြစ်ပါတယ်။ မရေးတာ ကြာ။ ရေးလေ့ ရေးထ မရှိပြန်တော့လည်း ရေးလို့ကို မထွက်တော့ပါဘူး။
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရ ဘလော့ဂါဘ၀ကို ရေးဖို့ မမတင့်က Facebookမှာ နှိုးဆော်ထားကတည်းက ကြိုးစားတာ ခါးတွေ ညောင်းလာလို့ ဆေးတွေသာ ရက်ဆက် လိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ စာဖတ်သူများကို မျက်စေ့ညောင်း ခါးညောင်း ဖြစ်အောင် ဖတ်ရမည့် ပို့စ်တပုဒ်တော့ ထွက်မလာပါဘူး…:P
ဘလော့ဒေး အမှတ်တရအနေနဲ့ ရေးဖော် ရေးဖက် ဘလော့ဂါများ၊ စာဖတ်သူများ၊ Online ပေါ် စာရေးခြင်းကို အားပေးနေသည့် ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ချစ်ခြင်း မေတ္တာများ ထောင့်ပေါင်းစုံမှ ပို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
Labels: ဘလော့ခြင်း, သီတာ